Isa Chromium OS pane pc yako neCloudready | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Neverware kambani yakaburitsa inoshanda system mugore inonzi Cloudready, ino sisitimu inoona nezve kufambisa kuiswa kweChromium OS, Google's cloud operating system, iyo yaive nematambudziko ekumisikidza mune zvakajairika michina nekuti Google haina kupa ruzivo mune izvi.
Cloudready inokwanisa kuisa vhezheni yeChromium OS nenzira yakasimba pc yedu, vhezheni isingape zvikanganiso uye izvo zvinogadziridza zviwanikwa zvemakomputa kusvika pakukwirira.
Kutenda kune Neverware chirongwa, Chromium OS masisitimu anogona kuiswa ne Cloudready pamakomputa ezvepasi-zviwanikwa, iyo yakave nherera mushure mekuguma kweWindows XP rutsigiro (kunyangwe ivo vachigona zvakare kumisikidza zvimwe zvekuparadzira zveLinux seLubuntu kana Puppy Linux).
Ichi chirongwa yakatanga kugadzirirwa chikamu chedzidzo, mavanopa marezinesi ekushandisa kumakomputa echikoro, nekudaro vachivimbisa kuti zvikoro nemari shoma zvinogona kupa vadzidzi vavo makomputa anehunhu. Nekudaro, ivo vakaburitsa yemahara vhezheni inowanikwa yekurodha chero kupi, asi kubvisa zvimwe maficha eiyo vhezheni yezvikoro, iri yega.
Nekudaro, ino sisitimu ine zvimwe zvinokanganisa, pakutanga, haienderane nemabhiti makumi matanhatu nemasere, ayo, achisiya parutivi dambudziko regore ra64, haigone kufarirwa nevashandisi vazhinji. Gare gare haina live CD modhiNaizvozvo, kuti tiedze, tinofanirwa kuiisa pakombuta yedu (kunyangwe tichigona kushandisa mabhenefiti eVirtualBox kuyedza).
Kana iwe uchida kurodha pasi ino system, enda ku purojekiti webhusaitiPano, kana iwe ukadzvanya pane sarudzo yekurodha pasi izvozvi, mufananidzo unozotorwa pasi zvakananga mune yakamanikidzwa faira. Iwe zvakare une zvinyorwa zviripo pazviri. Zvekuisa tevedza rairo muvhidhiyo yandakatumira pamusoro kubva papeji irinotsanangurwa zvakadzama uye nhanho nhanho.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Isa Chromium OS pane pc yako neCloudready
Google boot akadaro
Isa iyo pachako, haina kukukanganisa.
Pindura kuGoogle Boot
Uye wadii kuzviita? Ini ndine laputopu laptop yakatenderedza iyo yandaigona kuyedza pairi.